HyperX Pulsefire Degdeg, waxaan dib u eegeynaa jiirka ciyaarta casriga ah | Wararka Gadget
Miguel Hernández | 01/04/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 26/03/2021 23:35 | General, Reviews
Qalabka durugsan ayaa muhiim u ah sida PC laftiisa marka ay timaado ku raaxeysiga saacadaha dheer ee ciyaaraha fiidiyowga, tani waa sida saxda ah waxa ku dhacaya HyperX, sumad loo aqoonsan yahay inay buuxiso baahiyaha cayaartoyda ugu badan ee arrintan la xiriirta. Markan waxaan sidoo kale dooneynaa inaan kuu keenno tijaabadii ugu dambeysay ee shey la xiriira ciyaaraha.
Waxaan si qoto dheer u eegeynaa HyperX Pulsefire Haste cusub, oo ah jiirka ugu dambeeya ee ciyaarta kaas oo kuu oggolaanaya inaad sida ugu badan uga soo baxdo natiijooyinkaaga. Jiirarka noocan ah waxay ku noqdeen kuwa aad moodada kuwa ku takhasusay khubarada, ma runbaa inay bixiyaan natiijooyin wanaagsan?
HyperX waxay soo saartaa qalab noocan oo kale ah oo leh xiriir joogto ah, kiiskan waxaan leenahay qaab dhaqameed caadiya, inkasta oo ay tahay mid la yaab leh inay leedahay daraasiin daloolo ah si loo yareeyo culeyska inta ugu macquulsan.Natiijo ahaan, waxaan leenahay culeys aan lahayn xarig 59 garaam ah iyo isku darka 80 garaam. Iyada oo leh gebi ahaanba wareegsan iyo naqshad caadi ah, waxay leedahay badhan dusha sare si ay ula qabsato xawaaraha dhaqdhaqaaqa, labada badhan ee soo jireenka ah, giraangalka iswaafajiya iyo laba badhan oo ku yaal aagga suulka. Tani waa nuxurka xirmada:
TTC Dahabka Microtecs Dahabka
Xadhig dhejisyo dheeri ah ayaa lagu daray
Wadarta badhannada: Lix
Waxay ka samaysan tahay caag madow, oo cabbirkiisu yahay 124.2 x 32.2 x 66.8 mm guud ahaan. Waa in la ogaadaa sida ay u noqon karto si kale, waxaan leenahay a RGB LED kaas oo ku dhex jira kiiskan shaashadda jiirka, oo taasi waa mid aad u fudud, faahfaahinta noocan ah waxaa lagu xadiday ugu badnaan iyada oo laga door bidaayo raaxada weyn ee qalabka.
Sida dareeraha, waxaan ku leenahay a Pixart PAW3335 oo leh xallinta illaa 16.000 DPI, in aan ku habeyn karno adeegsiga badhanka 400/800/1600 ilaa 3200 DPI. Tani waxay na siinaysaa xawaare guud 450ips oo leh xawaare ugu badnaan 40G. Tan waxaa weheliya furayaasheeda micro-boodhka oo aan iska ilaalin karin TTC Golden oo taageera qiyaastii 60 milyan oo guji.
Xusuusta isku dhafan, waxay leedahay hal muuqaal oo keliya, oo lagu qaabeyn karo barnaamijka HyperX ee aad ka soo dejisan karto CADADKA. Xawaaraha codbixinta ayaa ah 1.000 Hz iyada oo loo marayo HyperFlex USB Cable oo leh teknoolojiyad dhaqameed USB 2.0 ah.
Xaaladdan oo kale, waxay na siisay jiir yar oo dhexdhexaad ah, oo ku faanaa iftiin iyo xaqiiqda ayaa si sax ah u eg. Waxay ku timaaddaa mid raaxo leh waxayna la kulantaa astaamaha farsamo ee loo ballanqaaday, oo si sax ah loogu hagaajiyay qiimaha lacagta. Waa in la ogaadaa in aan ka helno qiimo dhan 59,99 euro meelo kala duwan oo iib ah sida Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Dhaqdhaqaaqa 'HyperX Pulsefire Haste', waxaan dib u eegeynaa jiirka 'ultralight game mouse'
Xplora X5 Ku ciyaar smartwatch-ka kuwa yaryar